काेराेनाभाइरस भ्याक्सिनमा थाइल्याण्डकाे सफलता, कसरी भयाे सफल ? – Jagaran Nepal
काेराेनाभाइरस भ्याक्सिनमा थाइल्याण्डकाे सफलता, कसरी भयाे सफल ?
एजेन्सी आइतबार, जेठ ११, २०७७
कोरोनाले कहर बरन्काउँदै छ। विश्वभरका सबै देशहरू यसको खोपको खोजीमा दिन रात व्यस्त छन्। यस घटनामा थाईल्याण्डले खोपको बारेमा केही आशा जगाएको छ। थाइल्यान्ड अब भ्याक्सिन परीक्षणको अर्को चरणमा पुगेको छ।
रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार यस थाइल्यान्ड परियोजनाले प्रारम्भिक सफलता पाएको छ र चूहोंमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको छ। बाँदरमा यो खोपको परीक्षण सुरु भएको छ। थाईल्याण्डले भने पनि छ कि कोरोना खोप छ देखि सात महिनामा बनाउन सकिन्छ।
थाईल्याण्डको उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसन्धान र नवीनता मन्त्री सुवात मेसेन्सेले भने कि चूहोंमा परीक्षण गरिसकेपछि अनुसन्धानकर्ताहरू खोप जाँचको अर्को चरणमा लागिरहेका छन्। उनले भने कि सेप्टेम्बरसम्ममा तीन खुराकमा काम भइरहेको छ र सेप्टेम्बरमा ‘स्पष्ट परिणाम’ पाउने आशा छ।
मन्त्री सुवातले शनिबार प्रेस वार्तामा भने कि यो परियोजना मानिसजातिको लागि हो। थाईल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले नीति बनाएका छन कि हामीले खोप विकास गर्नु पर्छ र यस कार्यक्रमले विश्वभरिका कर्मचारीहरुलाई जोड्नु पर्छ।
यसभन्दा पहिले थाईल्याण्डका एक वरिष्ठ अधिकारीले भ्याक्सिनको बारेमा भनेका थिए कि चूहोंमा परेको परीक्षण नतीजा सकारात्मक रहेको छ। यस्तो अवस्थामा, आशा छ कि अर्को वर्ष सम्म, त्यहाँ कोरोना भाइरस खोप तयार हुनेछ।
प्रवक्ता ताभिसिन भिसानुथिनले भने कि चूहोंमा खोपको सफलतापूर्वक परीक्षण गरे पछि अर्को हप्ता बाँदरमा एमआरएनए (मेसेन्जर आरएनए) खोपको परीक्षण सुरु गरिनेछ। उनले भने कि थाई भ्याक्सिन अर्को वर्ष मानिसमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
थाई खोप थाईल्याण्डमा नेशनल इन्स्टिच्युट भ्याक्सिन, मेडिकल साइंसेज विभाग र Chulalongkorn विश्वविद्यालयको खोप अनुसन्धान केन्द्र द्वारा विकसित गरिएको छ।
यो थाहा हुन सक्छ कि १०० भन्दा बढी देशहरू कोरोना भाइरस खोपको खोजीमा संलग्न छन्। धेरै जसो देशहरूमा परीक्षण यसको शुरुवात चरणमा छ, जबकि अन्तिम चरणमा परीक्षण धेरै देशहरूमा भइरहेको छ। अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस खोप मार्केटमा आउन कम्तिमा १२ महिना लाग्ने चेतावनी दियो।
अर्कोतर्फ, अक्सफोर्ड युनिवर्सिटीमा, खोपमा चलिरहेको प्रोजेक्टको परीक्षण शुक्रवार सफल भएको छ। यस परियोजनाले मानव परीक्षणहरूको पहिलो चरण सफलतापूर्वक पार गर्यो र अब दोस्रो र तेस्रो चरण चाँडै सुरु हुने छ।
यसका साथै चिनियाँ वैज्ञानिकहरू पनि यो दाबी गर्छन् कि खोप भाइरस खोप बिना खोप्न सकिन्छ। वास्तवमा, वैज्ञानिकहरू भन्छन कि यस्तो औषधि चीनको प्रयोगशालामा सिर्जना भइरहेको छ जुन कोरोना रोक्न प्रभावी साबित हुनेछ। यो औषधि चीनको प्रतिष्ठित पेकिंग विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गरिरहेका छन्।